6 Ọ bụ mgbe ahụ ka Eze Darayọs nyere iwu, ha wee gaa mee nchọpụta n’ụlọ a na-edebe ihe ndekọ+ na akụ̀ n’ime Babịlọn. 2 A hụkwara otu akwụkwọ mpịakọta n’Ekbatana, n’ebe e wusiri ike nke dị n’ógbè Midia+ a na-achị achị, e dekwara n’ime ya, sị: 3 “N’afọ mbụ nke ọchịchị Eze Saịrọs,+ Eze Saịrọs nyere iwu banyere ụlọ Chineke nke dị na Jeruselem. ‘Ka e wughachi ụlọ ahụ ka ọ bụrụ ebe ha ga na-achụ àjà,+ a ga-atọkwa ntọala ya, ọ ga-adị kubit iri isii n’ịdị elu, dịrịkwa kubit iri isii n’obosara,+ 4 a ga-akwara nnukwu nkume+ dọba ná nkebi atọ, otu n’elu ibe ya, na otu nkebi osisi;+ a ga-esikwa n’ụlọ eze na-eweta ihe a ga-emefu.+ 5 Ka e bughachikwa arịa ọlaedo na arịa ọlaọcha+ ndị dị n’ụlọ Chineke bụ́ ndị Nebukadneza+ bupụtara n’ụlọ nsọ nke dị na Jeruselem bute na Babịlọn, ka e buga ha n’ụlọ nsọ dị na Jeruselem n’ebe ha na-adị, ka e debekwa ha n’ụlọ Chineke.’+ 6 “Ugbu a, Tatenaị+ bụ́ gọvanọ ofe Osimiri Yufretis,+ Shita-bọzenaị+ na ndị ọrụ ibe ha, ndị gọvanọ+ ọkwá ha dị ala bụ́ ndị nọ n’ofe Osimiri Yufretis, unu agala ebe ahụ nso.+ 7 Unu egbochila ọrụ ahụ a na-arụ n’ụlọ Chineke.+ Gọvanọ ndị Juu na ndị okenye ndị Juu ga-ewughachi ụlọ Chineke n’ebe ọ dịbu. 8 Enyewo m iwu+ banyere ihe unu ga-emere ndị okenye ndị Juu a, maka iwughachi ụlọ Chineke; a ga-esikwa n’akụ̀ eze+ nke a tụtara n’ụtụ n’ofe Osimiri Yufretis na-akwụ ndị ikom a ụgwọ+ ngwa ngwa n’akwụsịghị akwụsị.+ 9 Ihe ndị dịkwa mkpa, ụmụ oké ehi+ na ebule+ na ụmụ atụrụ+ maka àjà nsure ọkụ a ga-achụrụ Chineke nke eluigwe, ọka wit,+ nnu,+ mmanya+ na mmanụ,+ dị nnọọ ka ndị nchụàjà nọ na Jeruselem si kwuo, ka a na-enye ha ihe ndị a kwa ụbọchị n’akwụsịghị akwụsị; 10 ka ha wee nọgide na-achụrụ+ Chineke nke eluigwe àjà ịjụrụ obi+ ma na-ekpe ekpere maka ndụ eze na ụmụ ya.+ 11 Enyewokwa m iwu na onye ọ bụla nke mebiri+ iwu a, a ga-ewepụta otu osisi+ n’ụlọ ya wee kwụwa+ ya n’elu ya, ụlọ ya ga-aghọkwa ebe ọha na-eje mposi n’ihi ya.+ 12 Ka Chineke onye mere ka aha+ ya biri n’ebe ahụ kwatuo eze ọ bụla na ndị ọ bụla ga-esetị aka mebie iwu a, bibiekwa+ ụlọ Chineke nke dị na Jeruselem. Ọ bụ m bụ́ Darayọs na-enye iwu a. Ka e mee ya n’egbughị oge.” 13 Tatenaị bụ́ gọvanọ ofe Osimiri Yufretis,+ Shita-bọzenaị+ na ndị ọrụ ibe ha wee mee otú ahụ n’egbughị oge, dị nnọọ ka Darayọs bụ́ eze ziri ozi ka e mee. 14 Ndị okenye+ ndị Juu nọ na-ewu ụlọ ahụ+ ma na-enwe ọganihu n’ihi amụma nke Hagaị+ onye amụma na Zekaraya+ nwa nwa Ido+ nọ na-ebu, ha wukwara ya ma wuchaa ya n’ihi iwu Chineke Izrel+ nakwa n’ihi iwu Saịrọs+ na Darayọs+ na Atazaksis+ eze Peshia tiri. 15 Ha wee wuchaa ụlọ a n’abalị atọ n’ọnwa Eda,+ ya bụ, n’afọ nke isii nke ọchịchị Eze Darayọs. 16 Ụmụ Izrel, ndị nchụàjà na ndị Livaị+ na ndị fọdụrụ ná ndị bụbu ndị a dọọrọ n’agha+ wee jiri ọṅụ rara ụlọ Chineke a nye.+ 17 Maka ịrara ụlọ Chineke a nye, ha wetara otu narị ehi, narị ebule abụọ, narị ụmụ atụrụ anọ, na mkpi iri na abụọ ka ọ bụrụ àjà mmehie maka Izrel dum, dị ka ole ebo Izrel dị.+ 18 Ha wee họpụta ndị nchụàjà dị ka ọkwá ha sị dị, họpụtakwa ndị Livaị n’ìgwè n’ìgwè+ maka ozi Chineke nke a na-eje na Jeruselem, dị ka ihe e kwuru n’akwụkwọ Mozis si dị.+ 19 Ndị ahụ bụbu ndị a dọọrọ n’agha wee mee ememme ngabiga+ n’abalị iri na anọ n’ọnwa mbụ.+ 20 Ebe ọ bụ na ndị nchụàjà na ndị Livaị mere onwe ha ka ha dị ọcha+ dị ka otu ìgwè, ha niile dị ọcha, ha wee gbuo anụ ememme ngabiga+ maka ndị niile bụbu ndị a dọọrọ n’agha nakwa maka ụmụnne ha ndị nchụàjà nakwa maka onwe ha. 21 Ụmụ Izrel ndị si n’ebe a dọọrọ ha n’agha lọta wee rie ya,+ tinyere onye ọ bụla nke kewapụworo onwe ya n’adịghị ọcha+ nke mba ndị dị n’ala ahụ wee sonyere ha, iji chọọ Jehova bụ́ Chineke Izrel.+ 22 Ha wee jiri ọṅụ mee ememme achịcha na-ekoghị eko+ ụbọchị asaa; n’ihi na Jehova mere ka ha ṅụrịa ọṅụ, o mekwara+ ka obi eze Asiria gbanwee n’ebe ha nọ iji mee ka aka ha dị ike n’ọrụ ụlọ ezi Chineke, bụ́ Chineke Izrel.